09/02/2018 - Page 2 sur 4 -
Mpanarato teny Tsimbazaza : Lehilahy iray nidoboka am-ponja
Nampisavorovoro ny olona rehetra teny Tsimbazaza sy ny manodidina ny fahasahiana teo amin’ny lehilahy iray izay nanarato tao amin’ny dobo fiompiana trondro tao amin’ny “Parc Tsimbazaza”. Voalaza tamin’izany mantsy fa tsy nisy tahotra mihitsy ity …Tohiny
Lozam-piarakodia teny Ambohibao : Vehivavy iray no namoy ny ainy
Nisehoana lozam-piarakodia mahatsiravina teny Ambohibao ny faran’ny herinandro lasa teo, nandriaka ny rà tamin’izany izay namoizana ain’olona iray teny am-pandehanana. Araka ny fampitam-baovao dia olona roa handeha hamonjy fodiana no niharan-doza vokatry ny tsy fitandremana …Tohiny
Filan-kevitry ny fampihavanana malagasy : Ilaina ny fitoniana mandritra ny fifidianana
Mitohy hatrany ny fihaonana izay tanterahin’ ny Filan-kevitry ny fampihavanana malagasy amin’ ireo mpisehatra na ihany koa antoko politika, izay misy sy mitsangana eto Madagasikara, ary izany dia tafiditra ihany koa amin’ ny fametrahana ny …Tohiny
Marc Ravalomanana : Mampifangaro ny fitantanana ny TIM sy ny CUA
Efa tsy menatra na/sy lany henatra. Mibaribary ankehitriny ny tsy fahaiza-mitantan’ingahy Marc Ravalomanana, Filoham-pirenena teo aloha. Hafangarony avokoa ny fitananana eo aminy amin’izao fotoana izao. Izany hoe, amin’ny maha filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara …Tohiny
Tsy takona hafenina. Izay no azo ilazana ny fomban’ny olon’ny Mapar sy ny TGV miaraka amin’i Andry Rajoelina ankehitriny. Efa tratran’izy ireo mantsy ny tanjona niriany, izay nanaovany hetsika tetsy amin’ny Parvis-ny Lapan’ny Tanàna tamin’iny ...Tohiny